Uncategorized – Khusi Limbu
मान्छेको नाकको लम्बाइ वा आँखाको गहिराइ उभित्रको ब्राम्हणवादको मानक हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई हिजो निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिएको वरियताक्रमले पुनः पुष्टि गरेको छ । यसले व्यक्तिको गोत्र र थरले उभित्रको जातिवाद र रंगभेदको मापन गर्न सकिन्न भन्ने देखाएको छ । समानता र समावेशीताको नारा दिएर ...
पद्मसुन्दर लावतीलाई यसरी क्षमा दिएकी थिइन् सुबेदार अन्तरीले
“मैले बाहुनसित विहे गरेर तेरो के बिगारिदिएँ ए परसादे?” यति मात्र भन्दै गरेको यताको हुलमा के देख्या थियौं कतिखेर मञ्चमै पुगेर भाषण गरिरहेको एक जना पूर्व प्रधानपञ्चलाई गएर मुक्का हानेको देख्न पाइयो । त्यति मात्रै होइन पूर्व प्रपले समातिरहेको बडेमाको माइक खोसेर उनकै छातीमा बजारिन् – बड्याम्म ...
चार गोटा कुराहरु
(१) गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचिरहेका भए आज उनी ९७ बर्षका हुने थिए । आज जसले जति नै ठुल्ठुला कुरा गरे पनि (आउनुहोस् बहस गरौं) नेपालमा एक जना मान्छेको चाहाना दृढता र सुझबुझविना नेपालमा गणतन्त्र संभव थिएन । नेपाली कांग्रेस इतर मात्र होइन, आज कांग्रेस भित्रै पनि समय–समयमा ...
समाजवादको बाटो अग्रगामी हुन्छ, पश्चगामी होइन
देशमा सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक मानिएको दल नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक भइरहँदा हिन्दु धर्मलाई राष्ट्रको मूल धर्म बनाउन प्रयासरत एक पक्षले उक्त कुरा बैठकमा पेश गर्ने भएको छ । मोदीले भारतमा हिन्दु राष्ट्रवादको नारा बाँडे । ओलीले नेपालमा एकपटक भारतबिरोधी राष्ट्रवादको नारा घन्काए । त्यसपछि ...
Thank you for visiting my personal website. The main purpose of starting https://ivazz.com/khusilimbu is all about discovering my own passion and sharing it with like-minded people like you. In an era where we have marveled about social networking and real-world networking, we never know what kind of opportunities come ...
गधालाई के थाहा हिराको मोल कति भनेर? October 19, 2020
पद्मसुन्दर लावतीलाई यसरी क्षमा दिएकी थिइन् सुबेदार अन्तरीले October 19, 2020
चार गोटा कुराहरु October 19, 2020
तपाईं POLITICS गर्ने कि POLITICS गर्ने ? October 19, 2020
समाजवादको बाटो अग्रगामी हुन्छ, पश्चगामी होइन October 19, 2020